Polishing ဖြစ်စဉ်ကိုသင်မည်မျှသိသနည်း။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / Polishing ဖြစ်စဉ်ကိုသင်မည်မျှသိသနည်း။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-07-05 မူလ:ဆိုက်ကို
လက်ရှိအချိန်မှာ,Polishing နည်းပညာအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ထိုအရာရိုးရာနှင့်လိုအပ်သောကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကွက်မှာများစွာသောလည်းရှိပါတယ်ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါ tools တွေကို, ကဲ့သို့ဉာဏ်များသောကြိတ်ဆုံကိရိယာ, စွယ်စုံ rotary tool,Multi-ဘောပင်ဘောပင် စသည်တို့ကိုအချို့သည်လက်ျာ bits နှင့်အတူအရောင်တင်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်သိလဲသည်းခံဖြစ်စဉ်ဒီနေ့ငါတို့ပြောပြလိမ့်မယ်polishing ဖြစ်စဉ်များ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ။
စက်မှုဝေဖန်မှုများသည်အမျိုးမျိုးသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုအပ်နှံထားသော polishing စက်ပေါ်တွင်ပြုလုပ်သည်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်တစ် ဦး ရေးစပ်သည်ပါဝါ tool ကိုစက်နှင့် polishing disc ကို။ဟုတ်ပါတယ်,ဉာဏ်များသောပါဝါကြိတ်စက်သို့မဟုတ်ပါဝါ Rotary ToolPolishing function ကိုလည်းဖြင့်လည်းအလုပ်ကိုပြုနိုင်သည်။ပွတ်ရမည့်ထုတ်ကုန်၏ပစ္စည်းအရအဆိုအရပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏စားသုံးသူများကို polishing disc တွင်ကပ်ထားသည်။ ကြမ်းတမ်း polishing နှင့်ဒဏ်ငွေ polishables များကိုရွေးချယ်ထားသည်။ polishing အခါဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်ပါဝါကိရိယာကိရိယာ,နမူနာ၏ကြိတ်ခြင်း၏မျက်နှာပြင်အညီအမျှအပေါ်ဖိထားပါစေpolishing disc ကိုလှည့်ပါဝါ tool ကို၏.ဖိအားသည်အလွန်ကြီးမားသောမဖြစ်သင့်ပါ, ၎င်းသည်အစွန်း မှစ. disk ၏ဗဟိုသို့အဆက်မပြတ်အပြန်အလှန်ပြောဆိုသင့်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောအမှုန့်များနှင့်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ခြင်းမျက်နှာပြင်အကြားဆွေမျိုးကြိတ်ဆုံနှင့်လှိမ့်ခြင်းနှင့်လှိမ့်ခြင်းများမှတစ်ဆင့်ဝတ်ဆင်အမှတ်အသားများကိုဖယ်ရှားပြီးတောက်ပသောမှန်မျက်နှာပြင်ကိုရရှိသည်။
စက်မှု polishing ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
သိသာထင်ရှားတဲ့ t ကိုသူကအားသာချက်၏ပါဝါ tool ကို၏စက်မှု polishing တန်ဖိုးနည်းခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပါတယ်.အားနည်းချက်အနိမ့်သည်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မညီမညာဖြစ်နေသောမျက်နှာပြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်polishing အချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲဒါကြောင့်ပဲသေးငယ်တဲ့ area ရိယာမျက်နှာပြင်ကိုကုသမှုများအတွက်သင့်လျော်သော။
Electrolytic polishing သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအရောင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Printle ၏နိယာမကိုအသုံးပြုသောလျှပ်ကူးစက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးသတ္တုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သင့်လျော်သောလက်ရှိသိပ်သည်းဆတွင်သင့်လျော်သောလက်ရှိသိပ်သည်းဆတွင်ရှိသောသင့်လျော်သောလက်ရှိသိပ်သည်းဆတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းကို Electro ကိုလည်းခေါ်သည် polishing ။ လက်ရှိတွင်သံမဏိကိုဖြူစင်သောသံမဏိကိုပိုလျှံသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးခြင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုမိုများပြားလာပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေသော polishing တစ်ခုဖြစ်သည်။
များသောအားဖြင့်ကထုတ်ကုန်များ၏မျက်နှာပြင်ကို electroplating မတိုင်မီသို့မဟုတ်နေရာချပြီးနောက်မျက်နှာပြင်ကိုပြီးအောင်လုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကိုသတ္တုမျက်နှာပြင်အတွက်လွတ်လပ်သောအပြီးသတ်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်၎င်းကိုဝက်ဝံများ, ရောင်ပြန်ဟပ်ကိရိယာများ, ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများ, စက်ဘီးအစိတ်အပိုင်းများ, အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုတိုင်းတာခြင်း,
Electrolytic Polishing ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
အားသာချက်သည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပွတ်သပ်ထားသော, polishing အချိန်သည်တိုတောင်းသောကြောင့်မျိုးစုံအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပွတ်တိုက်နိုင်ပြီးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်, ကုန်ကျစရိတ်မှာနည်းပါးပြီးထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင်ကောက်ခံခြင်းကိုတိုးမြှင့်သည်။သော့ချက်ကငါပဲt ကိုသတ္တုမျက်နှာပြင်၏ပုံပျက်သောဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပေ.အားနည်းချက်မှာ Pro-prey-poin-poining ကုသမှုသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်, Electrolyte သည်ဘက်မရနိုင်သော, အတိုချုပ်0န်ဆောင်မှုနည်းပါးခြင်း,.
မော်တာနှင့်ပါဝါ tool ကို မြန်နှုန်းမြင့်ပါဝါကိရိယာကိရိယာ ပါဝါ tool ကို၏ polishing disc ကိုလှည့် စွယ်စုံပါဝါကြိတ်စက် ပါဝါ Rotary Tool ပါဝါ tool ကို၏စက်မှု polishing ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါ tools တွေကို စွယ်စုံစားကြိတ်ကိရိယာ စွယ်စုံ rotary tool ကို Multi-function grinder ဘောပင်